Maraykanka oo Xiyaraado saaray hantida Saraakiil ka tirsan dowladda Burundi – Radio Daljir
Maraykanka oo Xiyaraado saaray hantida Saraakiil ka tirsan dowladda Burundi
Nofeembar 24, 2015 1:29 b 0
Somalia, November 24, 2015 (Daljir) â€” Dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay kusoo rogayso xayiraado Afar ka mid ah Masâ€™uuliyiinta Burundi, kuwaasoo ay ku jiraan Xubno horay xilal uga soo qabtay xukuumadda; waxaana dhamaan lala xiriiriyay Qalalaasaha ka taagan dalkaas.
Afarta masâ€™uul ee laga xayiri doono fiisaha iyo hantida ayaa waxay kala yihiin; wasiirka amniga iyo dadweynaha, agaasime ku xigeenka booliiska dalka Burundi, agaasimihii hore ee sirdoonka iyo weliba wasiirkii hore ee difaaca.
Mareykanka ayaa waxay sheegeen in xaaladda ka jirta dalka Burundi ay tahay mid aad khatar u ah, isla markaana ay ka dhacaan dilal qorsheysan, xarig iyo weliba jir-dil ay ku kacaan hayâ€™adaha ammaanka Burundi.
Rabshadaha ka jira dalka Burundi ayaa billowday markii madaxweynaha dalkaas, Pierre Nkurunziza’s uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad hoggaanka dalkaas u tartamayo, taasoo keentay inay mucaaradku diidaan, iyadoo rabshadaha taagan ay ku dhinteen 240-qof tan iyo bishii Abriil ee sannadkan.
RW Cumar oo Isku-shaandhayn kooban ku sameeyay Golihiisa xukuumadda